Maxaa loo dilayaa Shimbirtan Mareykanka ah ee Australia gashay? - BBC News Somali
Booliska Australia waxay rumeysan yihiin in shimbirtan ay ku soo safartay markab xamuul qaada
Shimbir, nooceedu yahay kuwa ay Soomaalidu u taqaanno "qoolleey xamaam", oo u safartay waddanka Australia, iyadoo ka tallowday badweynta Pacific, ayaa lagu wadaa in la dilo kaddib markii ay ku xad gudubtay shuruucda adag ee waddankaas uu u sameystay karantiilka.
Laakiin mas'uuliyiinta Australia waxay sheegeen in shimbirtan, oo lagu magacaabo Joe, ay keeni karto "khatar dhinaca caafimaadka ah" oo waxyeelleyn karta shimbiraha reer Australia.
Sidaas awgeedna, waxaa la go'aansaday in lasoo qabto oo la dilo.
"Aad buu shimbirku caato u ahaa, sidaas awgeed buskud ayaan u burburiyay bannaanka ayaana u dhigay," ayuu yidhi isagoo la hadlayay Wakaaladda Wararka ee AP.
"Iyadoo aan la eegeynin waddanka ay kasoo jeeddo, shimbir kasta oo aan la marinin shuruucda loogu talagalay xayawaanka dibadda laga keeno iyo tijaabooyinka caafimaad ee loogu talagalay, looma oggola in ay ku dhex noolaato Australia," ayuu bayaan uu soo saaray ku yidhi afhayeen u hadlay waaxda beeraha, biyaha iyo deegaanka.
"Xalka kaliya ee looga badbaadi karo khatarta caafimaad waa in shimbirtaas la dilo," ayuu sii raaciyay.
Maxay tahay shimbirta lagu kala iibsaday 1.9 milyan oo doolar?